I just wanna save you!!Please have mercy on me!!! - Part9- Wattpad
960 152 5
သပ်ရပ်ကာ ကျယ်ဝန်းသောကုန်တိုက်ကြီး၏ အလွှာတစ်ထပ်စီဝယ် ရှုပ်ရှပ်ခတ်နေခြင်းမဟုတ်ဘဲစျေးဝယ်သူများအမျိုးအစားစုံလင်စွာသွားလာနေကြသည်။ ချက်ပြုတ်ရန်ဟင်းသီးဟင်းရွက် အသားငါးများလာဝယ်သောအိမ်ရှင်မများရှိသကဲ့လို့ ဘရန်းအမျိုးမျိုးကို ဂုဏ်ပကာသနအတွက် ရှောပင်းထွက်သော သူဌေးကတော်များလည်းရှိသည်။ကလေးသူငယ်များ၊သက်လတ်ပိုင်းလူကြီးများအပြင် ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကျောင်းသားများလည်းရှိသည်။ထိုအမျိုးအမျိုးသောလူများထဲတွင် ချိုက်မင်ထန်းနှင့်သူ၏သူငယ်ချင်းရည်းစား ကောင်လေးလည်းပါသည်။
သူတို့နှစ်ယောက်သည် သူငယ်ချင်းအဖြစ်မှ ရိုးရှင်းစွာပင်ချစ်သူတွေဖြစ်သွားခဲ့ကြသည်။
ချိုက်မင်ထန်း ဂေဟာလာသည့်တနေ့တွင် ဝူရန့်ကိုအကိုကြီးတစ်ယောက်ကနှောင့်ယှက်နေသည့်မြင်ကွင်းကို မြင်လိုက်ရသည်။
လီဝူရန်သည် မိန်းမဆန်စွာချောမောသည်မှာ အမှန်ဖြစ်သော်လည်း စိတ်ဓာတ်က ပြတ်သားသည်။
သို့သော် ထိုပုံစံလေးကပင် အချို့သူများအတွက်ဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်နေပြန်သည်။
သူတို့ထက်နှစ် နှစ်ခန့်ကြီးသော်လည်း ချိုက်မင်ထန်းရဲ့လက်ချက်ကြောင့် သုံးလေးရက်လောက်တော့ ဆန်ပြုန်သောက်ခဲ့ရသည်။သူ၏သူငယ်ချင်းကိုအခြားသူက ဆွဲလားရမ်းလားပုံစံမျိုးဖြင့်မြင်လိုက်ရသည့်အတွက် သဝန်တိုစိတ်များထွက်ပေါ်လာပြီးထိုနေ့၌ပင်
တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက်နားလည်မှုအပြည့်ရှိသည့်လူတကာအားကျရသော အတွဲမျိုးပင်ဖြစ်သည်။ယခုလည်းရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်း စျေးဝယ်လာသည့်ပုံစံဖြင့် ဒိတ်နေကြခြင်းဖြစ်သည်။
"မင်းတို့ကောင်တွေများ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်ရည်းစားတွေထားကြတယ်ကိုး"ဆိုင်ရှင်ဦးလေးကြီး၏စကားအားဘာမှပြန်မပြောပဲ ရေခဲမုန့်ခွက်ကိုသာယူပြန်ခဲ့လိုက်သည်။